Yintoni iSicwangciso seNtengiso? | Martech Zone
Kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, bendincedisa abathengi be-Salesforce ngokuphuhlisa isicwangciso sendlela yokusebenzisa ezona ziqonga zabo zinelayisensi. Lithuba elinomdla kwaye elona liyandothusa. Ukuba ndingumsebenzi wokuqala we-ExactTarget, ndingumntu othanda kakhulu amandla angapheliyo eSalesforce kunye nazo zonke iimveliso ezikhoyo.
Eli thuba lize kum liqabane leSalesforce elinegama elihle lokuphumeza, ukuphuhlisa nokudibanisa ingqokelela yamaqonga eSalesforce kubaxumi bawo. Kule minyaka idlulileyo, bayikhuphe ngaphandle epakini… kodwa baqale ukuqaphela umsantsa kushishino ofuna ukuzaliswa - qhinga.
I-Salesforce ibonelela ngezixhobo ezingenakubalwa kunye neemeko zokusebenzisa ezibalaseleyo kwithemba lokuba abanye abathengi balisebenzisa kakuhle njani iqonga. Kwaye iqabane lam leSalesforce liyakwazi ukulungiselela ukuphunyezwa kwaso nasiphi na isicwangciso. Isikhewu, nangona kunjalo, kukuba iinkampani zihlala zingena kuthethathethwano kunye ne-Salesforce kunye neqabane ngaphandle kokuchonga ukuba lisiphi na isicwangciso.
Ukuphunyezwa kweNtengiso ayisiyo Isicwangciso sentengiso. Ukuphumeza iSalesforce kusenokwenzeka ukuba kungathetha nantoni na - ukusuka kwindlela othengisa ngayo, othengisa kuye, onxibelelana nabo, indlela odibana ngayo namanye amaqonga amaqumrhu, kunye nendlela oyilinganisa ngayo impumelelo. Ukufumana iphepha-mvume kunye nokuthumela ukungena kwi-Salesforce ayisosicwangciso… kufana nokuthenga incwadi yokudlala engenanto.
Isicwangciso somsebenzi esiyilelwe ukukhuthaza nokuthengisa imveliso okanye inkonzo.
A qhinga urhwebo Isicwangciso somdlalo wonke somdlalo wokufikelela ebantwini kunye nokubenza abathengi bemveliso okanye inkonzo enikezelwa lishishini.
Ukuba uthenge qhinga urhwebo kumcebisi, ungalindela ukuba bazise ntoni? Ndibuze lo mbuzo kwiinkokeli kulo lonke eli shishini kwaye uya kumangaliswa luluhlu lweempendulo endizifumeneyo… ukusuka kwimbono ukuya ekuphelisweni ngokugqibeleleyo.
Ukuphuhlisa isicwangciso sokuthengisa linyathelo elinye kwinto yonke uhambo lokuthengisa:
Qaphela ukuba isicwangciso sandulela ukuphunyezwa, ukwenziwa kunye nokwenza ngcono. Ukuba uphuhlisa okanye uthenga isicwangciso sentengiso kwinkampani- oko akuthethi ukuba bazakusiphumeza eso sicwangciso, okanye basenze.
Umzekelo weQhinga lokuThengisa: Fintech
Sinewebhu emnandi eza ne-Salesforce, Ezona ndlela zintle zokuDala iihambo zabaThengi kwiiNkampani zeNkonzo zezeMali, apho sixoxa ngokuphuhlisa izicwangciso zohambo lokuthengisa kunye neenkampani zeNkonzo yezeMali. I-webinar yeza emva kokuba ndenze uphando lokophula umhlaba kwishishini lokwahlula-hlula kwedijithali okwenzeka phakathi kwamaziko emali kunye nabathengi bawo.
Ekuphuhliseni isicwangciso sentengiso, sichonge:
Ngoobani abathengi babo -Ukususela kulwazi lwabo lwezezimali, ukuya kwinqanaba labo lobomi, nakwimpilo yabo yezemali, nakwimbono yabo.
Apho iinzame zabo zentengiso bezikhona -Ukuba bekhulile kangakanani umbutho wabo ekwakheni ubudlelwane nabo. Ngaba babebazi ukuba bangobani, nokuba bayabafundisa okanye cha, nokuba ngaba abathengi babo baxhamle na ekufundeni kubo, kwaye ingaba umthengi uzenzele ngokwakhe?
Wenza njani umbutho - ukuba iziko belicela ingxelo, ngaba banokuvavanya le mibuzo ingentla, banazo izixhobo zokufundisa nokuxhobisa abathengi babo, kwaye ngaba uhambo belulolwabantu?
Ngaba umbutho ubunazo izibonelelo -Uphando lwethu lubonise izihloko ezilishumi elinambini apho abathengi babo bebehlala bephanda kwi-Intanethi- kulawulo lwamatyala, kulawulo lobutyebi, ekucwangcisweni kwezindlu nakucwangciso lomhlalaphantsi Abathengi babekhangela izixhobo ze-DIY zokubanceda ukuba bavavanye, bacwangcise, kwaye benze iimali zabo… kwaye amaziko ababesebenza nawo kufuneka abenazo zonke (okanye ubuncinci bazikhombe kwiqabane elikhulu).
Ngaba umbutho wawubonakala kwinqanaba ngalinye lokuthenga -Ukuchongwa kwengxaki, ukusonjululwa kwezisombululo, iimfuno kunye nokukhethwa kombutho wezemali, ngaba umbutho ungafikelela kuwo onke amabakala kuhambo lomthengi? Ngaba babenazo izixhobo kunye nezixhobo zokunceda ukuqinisekisa ukufunyanwa komthengi kunye nokubanceda baqhube ukubandakanyeka ekhaya?
Ngaba umbutho ungafikelelwa kwiimowudi ezikhethiweyo -Amanqaku ayisiyiyo kuphela ephakathi. Ngapha koko, abanye abantu abasathathi nexesha lokufunda kwakhona. Ngaba umbutho usebenzisa isicatshulwa, imifanekiso, iaudiyo, kunye nevidiyo ukufikelela kumathemba abo okanye kubathengi apho bakhoyo ukhetha?
Nje ukuba iphunyezwe, Impumelelo iza kulinganiswa njani ngesicwangciso sakho sentengiso? Phambi kokwenza isicwangciso, amandla emilinganiselo kufuneka athathelwe ingqalelo ukuze wazi ukuba iyasebenza. Uza kulinda ixesha elingakanani ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuba uphumelele kangakanani? Uya kulilungisa nini iphulo lakho? Uya kuwasonga ngaliphi ixesha ukuba awusebenzi?
Ukuba ungaphendula yonke le mibuzo, ngokuqinisekileyo unokuqina qhinga urhwebo. Isicwangciso sentengiso siza kukunceda utyhile, ufumanise, kwaye ucwangcise ukuba ufuna isixhobo okanye isixhobo.
Ukusuka kumzekelo we-fintech apha ngasentla, inkampani yakho inokufumanisa ukuba isiza asinasibali sokubala semali-mboleko yekhaya ngenxa yoko kwisicwangciso sakho sokwakha enye. Oko akuthethi ukuba isicwangciso-qhinga sichaza ukuba ikhalityhuleyitha ijongeka kanjani, uza kuyiphuhlisa njani, iza kubanjelwa phi, okanye uza kuyinyusa njani… lawo onke amanyathelo okuphumeza angenziwa ezantsi indlela. Isicwangciso kukwakha ikhalityhuleyitha ekufuneka uyifikelele kubathengi. Ukuphunyezwa kunye nokuphunyezwa kuza kamva.
Isicwangciso sisikhewu phakathi kweMfuno kunye noKwenziwa
Njengoko ndibonisana nemibutho engaphezulu nangaphezulu kunye ne-Salesforce, siyayikhupha ngaphandle epakini kwezi ndibano. I-Salesforce iye yanceda umthengi ukuba abone isidingo sesisombululo setekhnoloji ukubanceda kwintengiso yabo nakwimizamo yokuthengisa.
Iqabane le-Salesforce likhona ukubanceda baphumeze isisombululo seenkqubo kunye nezicwangciso abanethemba lokuzenza. Kodwa ndiphakathi kwezi zimbini zichonga umsantsa kwaye ndisebenza phakathi kwamaqonga, iqabane, kunye nomthengi wokuphuhlisa iplani ukufikelela kumathemba nakubathengi babo. Xa kukho isivumelwano phakathi kwethu sonke, iqabane leSalesforce liza lize lisombulule isisombululo, emva koko umthengi enze icebo.
Kwaye, ewe, njengoko silinganisa iziphumo, kuya kufuneka silungelelanise isicwangciso amaxesha ngamaxesha. Kwimeko yeshishini, oko kungathatha iinyanga ukufezekisa, nangona kunjalo.
tags: CRMiteknoloji yezemaliurhweboqhinga urhwebo